दक्षिणकालीको फर्पिङमा बस पल्टियो, २२ घाइते !! (ब्रेअकिङ्ग news) – Nepal
बा१ख ९९९९ दक्षिणकाली यातायात सडकमा भएको खाल्डोका कारण अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा २२ जना घाइते भएका छन् भने केहीको मृत्यु भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाका अनुसार मृतकको संख्या यकिन भएको छैन । ‘अहिले हामी उद्धार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘२–३ जनाको मृत्यु भएको भन्ने सूचना आएको छ ।’
थप विवरण अाउँदै ।
कांग्रेसले ‘फू’ गरे सरकार ढल्छ : कोइराला !!